अलैंची वस्तु बजारमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी अलैंची वस्तु बजारमा
on: ६ भाद्र २०७५, बुधबार ०९:०० लगानी
अलैंची वस्तु बजारमा
काठमाडौं (अस) । २०६३ सालमै वस्तु बजारको स्थापना भए पनि ऐन आउन २०७४ सालसम्म कुर्न पर्‍यो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियामक निकाय तोकिएको वस्तु बजारसम्बन्धी ऐनबमोजिम बोर्डमा पाँचओटा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरूले बजार स्थापनाका लागि निवेदन दिएका छन् । यति बेला बोर्डले ती निवेदनको सूक्ष्म अध्ययन गरेर कति ओटा कम्पनीलाई बजार स्थापनाका लागि अनुमति दिने ? बजारको क्षमता कति हो ? नियमनका अन्य व्यवस्था कसरी बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
ऐनले ५३ ओटा विभिन्न वस्तु सूचीकरणका लागि तोकेको छ । हालसम्म नेपालमा आयात हुने वस्तुहरू नै कमोडिटिज बजारमा लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएका छन् । तर, नेपालमै उत्पादित वस्तुसमेत लगानीका लागि आकर्षक हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई ऐनले उजागर गरिदिएको छ । त्यसमध्ये अलैंची, अदुवा, चिया, कफी र जुसलगायत कृषि उपज लगानीका लागि उपयुक्त अस्त्र (पोर्ट फोलियो) हुन सक्छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारको सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी अलैंचीलगायत यी सबै वस्तुहरूको उत्पादन, ग्रेडिङ, बजारीकरण तथा निर्यातका लागि कानुनी तथा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न सके यो क्षेत्रको विकाससँगै अर्थतन्त्रको उत्थानमा पनि ठूलो योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसले उत्पादक किसानदेखि व्यापारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी हुँदै सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त योगदान दिन सक्छ ।
बस्तु विनिमय बजारमार्फत मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), हस्तान्तरण (डेलिभरी), जोखीम व्यवस्थापन (रिस्क हेजिङ) तथा निर्यातका लागि खपत हुने बजारका वस्तु विनिमय बजारसँग साझेदारी गर्न सके यी वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धनसमेत गर्न सजिलो हुनेछ । यो प्रक्रियाले निर्यातजन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्ध प्रदान गर्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, यसले नेपालको चुलिँदो ब्यापार घाटालाई कम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
विश्वमै नेपाल र ग्वाटेमाला मात्रै ठूलो मात्रामा अलैंची उत्पादक मुलुकका रूपमा स्थापित छन् । नेपालमा उत्पादन हुने अलैंची कालो (ब्ल्याक कार्डेमम) हो भने ग्वाटेमालाको अलैंची हरियो (ग्रीन कार्डेमम) हो । यी दुवैको प्रयोग भने मसलाका रूपमै हुने गरेको छ । भारत, अरब देशहरू तथा युरोप अलैंचीको बजार हो ।
नेपाल कालो अलैंचीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । विगत १० वर्षमा नेपालका केही किसान र केही व्यापारीले कालो अलैंचीको उत्पादन तथा बजारीकरण तदारुकताका साथ गर्दै आएका छन् । तथापि प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । कालो अलैंचीका लागि संसारकै ठूलो उत्पादक मुलुक भएर पनि बजार विकास अभाव, प्रवर्द्धनका लागि ल्याइनुपर्ने नीति तथा पूर्वाधारको कमी र विश्व बजारसम्म पुग्न राज्यका तर्फबाट ठोस पहलकदमी भएको देखिन्न । नेपालमै पनि उचित बजार व्यवस्थापनको अभावले अलैंची उत्पादक किसान, व्यापार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्र, बजार प्रवद्र्धक कसैले पनि आवश्यक लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।
सन् २०१५/१६ मा ४ अर्ब २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको अलैंची निर्यात भएको थियो भने सन् २०१६/१७ मा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको थियो ।
अलैंचीसँगै अदुवा, चियालगायत अन्य कृषि उपज पनि वस्तु बजारका लागि राम्रा अस्त्र हुन सक्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुन्न । सन् २०१७/१८ मा अदुवा १८ करोड मूल्यबराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालको उत्पादित अदुवाको निर्यात बजारका रूपमा हालसम्म भारत मात्रै रहँदै आएको छ । तेस्रो मुलुकमा अदुवाको निर्यातका लागि पनि वस्तु बजारले सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
वस्तु बजार ऐन–२०७४ लागू भइसकेको अवस्थामा सो अनुरूप सङ्गठित बजारको प्रवर्द्धन र उचित व्यवस्थापनले यो क्षेत्रको समस्या निराकरणमा मद्दत पुग्नेछ । तसर्थ धितोपत्र बोर्ड तथा सरकारको सम्बन्धित निकायले वस्तु विनिमय बजारमार्फत यस क्षेत्रका विभिन्न प्रक्रियागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । यसको निर्यात प्रवर्द्धन तथा उत्पादनदेखि खपतसम्मका अग्रिम प्रक्रिया विकास गर्न आवश्यक छ ।